Itinye n'ọkwa siri ike Mgbakọ Usoro Ngwa-HLQ Hardening Heater
Itinye n'ọkwa Harding Mkpa Usoro Applicatons
Kedu ihe bụ hardening induction?
Ọkụ na-eme ka ike gwụ bụ ụdị ọgwụgwọ ọgwụgwọ nke akụkụ ígwè nwere carbon zuru ezu na-ewe iwe na mpaghara ntinye ma mezie ngwa ngwa. Nke a na - eme ka isi ike na nkụda nke akụkụ ahụ dịkwuo elu. Igwe na-ekpo ọkụ na-enye gị ohere ịnweta kpo oku a kapịrị ọnụ na ọnọdụ okpomọkụ a kara aka ma na-enyere gị aka ịchịkwa usoro mmezi ahụ. Usoro a na-emezigharị na-ekwe nkwa. Ọtụtụ mgbe, a na-etinye mgbatị nke itinye n'ọkwa n'akụkụ igwe nke kwesịrị ịnwe nguzogide akwa akwa, ma n'otu oge ahụ na-ejigide ihe ndị ha ji arụ ọrụ. Mgbe emechara usoro mmezigharị nke itinye n'ọrụ, ọ dị mkpa ka a gụchapụ ihe ndị ahụ e ji ọla kọpa mee na mmiri, mmanụ ma ọ bụ ikuku iji nweta ihe ụfọdụ akọwapụtara nke oyi akwa.
Ọkụ na-eme ka ike gwụ bụ usoro nke ime ngwa ngwa ma họrọ ihe na-eme ka akụkụ nke ígwè sie ike. A na-etinye eriri igwe ọla kọpa nke na-ebu ọkwa dị mkpa nke na-agbanwe agbanwe n'oge dị nso (anaghị emetụ aka) akụkụ ahụ. A na-ekpo ọkụ na, na nso elu ya site na ihe eji eme ihe ugbu a na nke hysteresis. Quench, na-ejikarị mmiri na mgbakwunye dị ka polymer, na-eduzi n'akụkụ ma ọ bụ na-emikpu ya. Nke a na-agbanwe usoro a iji gbasie ike, nke siri ike karịa usoro mbụ.
A na-ewu ewu, ụdị ọgbara ọhụrụ nke ihe na-eme ka obi sie ike. A na-eme akụkụ ahụ n'etiti etiti, na-atụgharị, ma gafere site na eriri na-aga n'ihu nke na-enye ma okpomọkụ ma na-imenyụ. A na-eduzi quench n'okpuru eriri igwe, yabụ ebe ọ bụla nke akụkụ ahụ na-eme ngwa ngwa ngwa ngwa na-esote kpo oku. Ike larịị, biri oge, i scanomi (ndepụta) ọnụego na ndị ọzọ na usoro mgbanwe na-kpomkwem na-achịkwa kọmputa.
Usoro ngbanwe nke ikpe na-eme ka ọ dịkwuo ike na-eguzogide, ike ọgwụgwụ na ike ọgwụgwụ site na okike nke oyi akwa dị elu ma na-echekwa microstructure isi na-adịghị emetụta.
Ọkụ na-eme ka ike gwụ a na-eji dịkwuo n'ibu Njirimara nke ferrous mmiri na a kpọmkwem ebe. Ahụkarị ngwa bụ powertrain, nkwusioru, engine mmiri na stampụ. Nmegharị nrụpụta bụ ihe magburu onwe ya na idozi ikike ikike / ọdịda ubi. Uru ndị bụ isi bụ mmụba nke ike, ike ọgwụgwụ na iyi nkwụsi ike n'akụkụ mpaghara na-enweghị ịmegharị akụkụ ahụ.
Usoro na ụlọ ọrụ nwere ike irite uru site na ime ka obi sie ike:
Tube & Pipe ike
Uru nke itinye n'ọgba ike:
Afọ masịrị maka mmiri na-doro oké loading. Induction na-eme ka ihu ike dị elu dị elu na ikpe miri emi nke nwere ike ijikwa oke nnukwu ibu. Ike ọgwụgwụ na-abawanye site na mmepe nke isi dị nro nke oke oyi akwa siri ike gbara gburugburu. Njirimara ndị a bụ ihe na-achọsi ike maka akụkụ ndị na-enweta mbido torsional na ihu na-enwe mmetụta dị ike. A na-eme nhazi nhazi otu akụkụ n'otu oge na-enye ohere maka ntụgharị akụkụ dị oke amụma site na akụkụ ruo akụkụ.
Kpọmkwem akara okpomọkụ na hardening omimi
Egwuregwu kpo oku na mpaghara
Easily ike n'ime mmepụta edoghi
Usoro ngwa ngwa na imeghachi
Enwere ike ime ka ihe ọ bụla rụọ ọrụ site na nkenke kachasị nke ọma
Usoro ịrụ ọrụ ike
Nchara na igwe anaghị agba nchara nwere ike ime ka obi sie ya ike:
Ndị na-agbazi agbaji, flanges, gia, biarin, ọkpọkọ, agbụrụ na mpụta, crankshafts, camshafts, yok, draịva ndị na-agbapụta, oghere ndị na-ewepụta, akara spindles, ogwe osisi torsion, mgbaaka na-egbu egbu, waya, valvụ, ihe egwu nkume, wdg.
Mụbara eyi Nguzogide
Enwere mmekọrịta dị n'etiti ịdị ike na nkwụsi ike iyi. Mgbachi mkpuchi nke otu akụkụ na-abawanye nke ukwuu site na mgbatị ọgbụgba, na-eche na ọnọdụ mbụ nke ihe a na-emechi anya, ma ọ bụ mesoo ọnọdụ dị nro.
Ikewanye na ike ọgwụgwụ Ndụ n'ihi Soft Core & Residual Compressive Stress na Mkpa
Nchegbu mkpakọ (nke a na-ewerekarị dị ka àgwà dị mma) bụ nsonaazụ nke usoro obi tara mmiri nke dị nso na-arụtụkwu olu karịa isi na usoro ahụ.
Parts nwere ike obi mgbe Mgbakasị na-esi ike iji mezie Ọkwa siri ike, dị ka achọrọ
Dị ka usoro ọ bụla na-ewepụta usoro nke martensitic, iwe iwe ga-ebelata ike ma belata mbibi.
Ọnọdụ miri emi na isi ihe siri ike
Depthdị ihe omimi dị omimi bụ .030 ”- .120” nke dị omimi karịa na usoro dịka carburizing, carbonitriding, na ụdị nitriding dị iche iche emere na okpuru ọnọdụ dị egwu. Maka ụfọdụ ọrụ dị ka anyụike, ma ọ bụ akụkụ ndị ka bara uru ọ bụrụgogo ọtụtụ ihe gwụrụ, ihe omimi nwere ike ịdị ½ inch ma ọ bụ karịa.
Nhọrọ Hardening Usoro na-enweghị masking chọrọ
Mpaghara ndị nwere ike ịgbado ọkụ ma ọ bụ na-arụ ọrụ na-adị nro - usoro ole na ole na-ekpo ọkụ ọkụ nwere ike ime nke a.
Obere Nsogbu Nsogbu
Ihe Nlereanya: ftlọ 1 “Ø x 40” ogologo, nke nwere akwụkwọ akụkọ abụọ na-enweghị ohere, nke ọ bụla 2 ”ogologo chọrọ nkwado nke ibu na iyi mgbochi. A na - eme ka itinye ihe ike na - emepụta ihe na - eme naanị ha, ngụkọta nke 4 ”. Site na usoro eji eme ihe (maọbụ ọ bụrụ na anyị abanye n'ime ogologo oge niile maka okwu ahụ), a ga-enwe ọtụtụ ibe mpe.
Na-enye ohere iji obere ego akwụ ụgwọ dị ka 1045
Ngwongwo kachasị ewu ewu nke eji eme ihe maka akụkụ iji mee ka obi sie ya ike bụ 1045. Ọ na-adị ngwa ngwa, na-akwụ ụgwọ dị ala, na n'ihi ọdịnaya carbon nke 0.45% aha, ọ nwere ike bụrụ ntinye nke 58 HRC + siri ike. O nwekwara nsogbu dị egwu nke ịkụcha n'oge ọgwụgwọ. Ihe ndị ọzọ a ma ama maka usoro a bụ 1141/1144, 4140, 4340, ETD150, na ọtụtụ nkedo.
Mmachi nke itinye n'ọgwụ ike
Na-achọ Ntinye Ntugharị na Ngwá Ọrụ nke metụtara Geometry nke Akụkụ
Ebe ọ bụ na njikọ njikọta-nke-eriri igwe dị oke mkpa iji rụọ ọrụ ọkụ, a ga-eji nlezianya họrọ nha na eriri igwe. Ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị na-agwọ ọrịa nwere ụlọ agha nke ihe eji eme ka ikpo ọkụ dị ka akụ, pin, rollers wdg. Na-arụ ọrụ dị elu ma dị elu, uru nke ọgwụgwọ ọgwụgwọ belatara n'otu akụkụ nwere ike belata ụgwọ ọnụ. N'ọnọdụ ndị ọzọ, uru injinia nke usoro a nwere ike karịa nchegbu ndị akwụ ụgwọ. Ma ọ bụghị ya, maka ọrụ olu dị ala, ihe mkpuchi na ngwa ọrụ na-emekarị ka usoro ahụ ghara ịdị irè ma ọ bụrụ na a ga-ewu eriri igwe ọhụụ. A ghakwara ịkwado akụkụ ahụ n'ụzọ ụfọdụ n'oge ọgwụgwọ ahụ. Gba ọsọ n'etiti etiti bụ usoro a ma ama maka akụkụ ụdị osisi, mana n'ọtụtụ ọnọdụ ndị ọzọ, a ghaghị iji ihe eji eme ihe.
O yikarịrị ka ọ ga-adaba na ọ ga-adaba na ọtụtụ usoro ọgwụgwọ ọkụ
Nke a bụ n'ihi kpo oku na ikpochapu ọkụ, yana ọchịchọ nke imepụta ntụpọ ọkụ na atụmatụ / akụkụ dịka: keyways, grooves, cross cross, threads.
Mgbagha na itinye ekwe ekwe
Ihe mgbagha na-adịkarị ukwuu karịa usoro dịka ion ma ọ bụ gas nitriding, n'ihi ọkụ ọkụ / ngbanye ọkụ na nsonaazụ mgbanwe martensitic. N'ikwu ya, ime ka nrụgide nwere ike ime ka ọ ghara ịda mbà karịa ọgwụgwọ ọkụ, karịsịa mgbe a na-etinye ya na mpaghara ahọrọ.
Mmachi nke ihe eji eme ka ike gwụ
ebe ọ bụ na usoro induden hardening usoro anaghị ejikarị mgbasa nke carbon ma ọ bụ ihe ndị ọzọ, ihe ahụ aghaghị ịnwe carbon zuru oke yana ihe ndị ọzọ iji nye obi ike na-akwado mgbanwe martensitic ruo ogo nke isi ike chọrọ. Nke a pụtara na carbon dị na mpaghara 0.40% +, na-emepụta ike nke 56 - 65 HRC. Enwere ike iji ihe carbon dị ka 8620 mee ihe na mbelata nsonaazụ siri ike (40-45 HRC na nke a). A naghị eji steels dị ka 1008, 1010, 12L14, 1117 eme ihe n'ihi ụda mmụba dị na ike isi nweta.
Itinye n'ọkwa Harding Mkpa Usoro nkọwa
Ọkụ na-eme ka ike gwụ bụ usoro eji eme ihe maka ekwesi ike nke igwe na ihe ndị ọzọ. A na-etinye akụkụ ndị a ga-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ n'ime eriri ọla kọpa wee kpoo elu karịa mgbanwe mgbanwe ha site n'itinye usoro ọzọ na eriri igwe. Uzo ozo di na eriri igwe na-ebute uzo magnetik ozo n'ime oru oru nke na-eme ka elu elu nke akuku ahu kpoo oku di elu n'elu mgbanwe mgbanwe.
A na-eme ka ihe ndị ahụ dị ọkụ site na mbara igwe magnetik na ọnọdụ okpomọkụ dị n'ime ma ọ bụ karịa na mgbanwe mgbanwe nke na-esochi ozugbo. Ọ bụ usoro electromagnetic site na iji eriri ọla kọpa ọla kọpa, nke a na-enye nri ugbu a n'otu oge na ike.
Categories FAQ, Technologies Tags zụta igwe na-agba ume, isi ike, hardening itinye n'ọkwa, ebe siri ike, hardening n'elu usoro, nkwalite ikpo ọkụ mmebi, induction hardening machine, machinegba ụgwọ igwe na-akwụ ụgwọ ọkụ, ego ịgbanye ume ọkụ, usoro induden hardening usoro, Igwe na-eme ka ike na-agwụ ike, usoro induden hardening system, Kedu ihe bụ itinye n'ọkwa Mail igodo